﻿	ဘာကြောင့် ရာသီများအကြား သွေးဆင်းရတာလဲ? | Find My Method
ဘာကြောင့် ရာသီများအကြား သွေးဆင်းရတာလဲ?
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ » ဆေးလုံး » ဘာကြောင့် ရာသီများအကြား သွေးဆင်းရတာလဲ?
အကယ်၍ သင်သည်လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကစပြီး ဆေးစတင်သောက်ခဲ့ပါက ပမာဏတိုးပြီး အားဖြည့်ကြည့်ပါ။ ဤပြသနာအလိုလို ပြေလည်သွားဖို့များသည်။
ဆေးလုံးကိုနေ့တိုင်းတစ်ချိန်တည်း၌သောက်ပြီးဆေးများကိုကျော်မသွားပဲ တစ်ကြိမ်ထဲနှစ်လုံးသောက်ပါ။ ဆေးများကိုကျော်သွားခြင်း သို့မဟုတ် တစ်ကြိမ်လျှင်နှစ်လုံးသောက်ခြင်းသည်သွေးစက်ကျဆင်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
FSRH Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare. (Amended 2019). Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare Clinical Guidance: Progestogen-only Pills. မှရယူရန် https://www.fsrh.org/standards-and-guidance/documents/cec-ceu-guidance-pop-mar-2015/